Shirkada Vodafone Oo Ku Bixineysa 130 Miyan Oo Yuuroo Gool Walba Oo Dhaliyo Saalax [Sabab] %
Qofna ma uusan filayn in Maxamed Saalax, markii uu bilowgii xili ciyaraeedkan uu Liverpool uga soo biirayey AS Roma, inuu sida hilaaca oo kale uga soo dhex-birtqi doono horyaalka aduunka ugu xiisaha badan ee Premier League, laakiin waa ay dhacday.
Laacibkaan Muslim-ka ah ee wadanka Masar kasoo jeeda ayaa wuxuu Reds, uga soo dhaqaaqay Talyaaniga aduun dhan 43 Miyan oo Yuuroo, isagoona hada guud ahaan kulamadii uu dheelay shabaqa soo taabtay 36 jeer, si gaar ah EPL 28 gool ayuu ka dhaliyay.
Shirkadda iskaarsiinta ee Vodafone, oo wadanka Masar laga leeyahay ayaa waxaa ay bilowday Barmaaij cusub, kaasoo ay ku fulineyso dalab uga yimid macaamiisheeda, kuwaasoo ku nool gudaha wadanka ay ka howgasho ee Egypt.
Sida laga soo xigtay, Majalada Daily Mirror, dalabkaan ayaa wuxuu yahay in gool walba oo uu kooxda Jürgen Klopp udhaliyo Saalax ay ku helayaan macaamiisha 11 daqiiqood oo bilaash ah iyo waliba Maaliyadda 11aad ee Saalax oo iyadana lacag la’aan ah.
43 Milyan oo qofood, kuwaasoo Masar ku nool islamarkaana macaashiima shirkad ka ah ayaa waxay daqiiqad walba isku celis-celis ahaan ay ka dhigan 25 pins.
Tani ayaa waxay ka dhigan tahay in shirkada ay ku bixineyso aduun lacageed dhan 118,250,000 GBP, ama 135,125,000 Yuuroo.
Sidoo kale, tani ayaa waxay qiimaha ahaan ku kacaysaa gool walba oo uu dhaliyo Maxamed Saalax illaa iyo dhamaadka xili ciyaareed aduun dhan 135 Milyan oo Yuuroo.
Sikastaba, heshiiskaan oo ay shirkadaan la gashay laacibka Liverpool, ayaa wuxuu qabsaday Bogaga hore ee Joornaalada wadanka Masar, iyagoona si weyn u hadalhaya faa’ida ay shirkaan ka halayso qandaraaskaan ay la gashay Maxamed Saalax.